Isono sobugqi sokuthandabuza kukuthandabuza ubuntu bokomoya. Isohlwayo kukungaboni ngasonye ngokomoya.
Vol. 7 JULAYI, 1908. 4
I-DOUBT ligama elisetyenziswa ngokubanzi phakathi kwabangafundanga kunye nakwabafundileyo. Kodwa bambalwa phakathi kwabo bagcina basebenze kangaka bayeke ukujonga nokujonga kumgaqo elimi kuwo.
Amathandabuzo avela kwi-duo, ezimbini, apho kubandakanywa umbono wobumbano malunga nayiphi na into, kunye nokwandisa ngokungapheliyo kuzo zonke izinto. Njengokungathandabuzeki oku kuchaphazelekayo ngumbono wezimbini, okanye zimbini, zihlala zihamba kunye nokungaziwa, kuba zahlulwe okanye zema phakathi kwezi zimbini. Uluvo lwesibini luvela kwinto, oluyingcambu yendalo okanye into. Ukusetyenziswa gwenxa kukodwa kungodwa, kodwa kubonakaliswa luphawu lunye-ubumdaka. Ubungqingqwa sisiqalo sokubonakaliswa kulo lonke ihlabathi. Ubomi buhlala buhleli kuzo zonke iatom. Ubunzulu kukwezinto ezimbini ezingahlukanisekiyo kunye ezichaseneyo zento, into.
Nganye yeqela elichasayo indissolubly ilawula elinye kwaye ilawulwa lelinye. Ngasihlandlo sinye enye ikwindawo yokuphakama enye kwenye. Amathandabuzo ahlala ehamba kunye nezibini, zibangela ukuba omnye athelele kwelinye aze emva koko abanjwe ngomnye. Ukuthandabuza kuyaziwa kuthi kuphela xa kungokusebenza kwengqondo, kodwa umbono wokuthandabuza ukhona kuwo onke amabakala emicimbi, ukusukela ekuqaleni ukubonakaliswa kokufumana ulwazi ngokupheleleyo. Amathandabuzo ayasebenza kuyo yonke imihlaba ebonisiweyo; okufanayo kumgaqo, kwaye ziyahluka ngokweplanethi yesenzo sayo.
Ukuthandabuza kunemvelaphi yakhe yokungazi. Iyatshintsha ngokweqondo lokuphuhliswa kobukho bayo. Emntwini, intandabuzo yile meko igqamileyo yengqondo, apho ingqondo ingayi kuthatha isigqibo sokukhetha enye yezifundo ezibini okanye izinto, kwaye ungathembi enye.
Ukuthandabuza ayisiyo imibuzo malunga nasiphi na isifundo, nokuba ayisiyophando kunye nophando, okanye yinkqubo yokucinga; nangona ihlala ihamba nengcinga, kwaye kuvela ekuphandeni nasekubuzeni isifundo.
Ukuthandabuza kufana nelifu eliba phezu kwengqondo kwaye liyithintele ekuqondeni ngokucacileyo, nasekucombululeni nasiphi na ingxaki ngokubhekisele kuyo. Njengelifu, ukuthandabuza kuyanda okanye kwehle ngokobungakanani nobunzima njengoko umntu esilela ukwenza ngokokuqonda kwakhe, okanye ukuzithemba nokuzenzela nokuzithemba. Kodwa ukuthandabuza yimeko yengqondo efunekayo ukuba ube namava kwaye woyiswe ngaphambi kokucaciswa kombono wengqondo unokufunyanwa.
Ukunxibelelana kunye nokunxulumene nokuthandabuza, njengookhokho, abafundisi, amahlakani, inzala kunye nabasebenzi bokuthandabuza, ukungathandabuzi, ukuthandabuza, ukungakhathali, ukungakhathali, ukungakholelwa, ukukrokrela, ukungabinampilo, ukoyikeka, ubumnyama, isimilo, ukungathobeki, ukungaqwalaseli, ukungaqiniseki, ubukhoboka, ubuvila, ukungazi, uloyiko, ukudideka nokufa. Le yeminye yemibandela uthandabuzo yaziwa ngayo.
Ukuthandabuza kuhleli ngaphakathi engqondweni, kona kuyahambelana nomsebenzi omnye wengqondo: lowo usebenza okanye uphawu lwengqondo olwaziwa ngokuba bubumnyama, ukulala. Ukuthandabuza yenye yezinto eziye zamisela indlela yokwakheka kwengqondo ukusuka kwelokuqala kumgca wokuxakeka kwengqondo. Ukuthandabuza yinto ebaluleke kakhulu kwizenzo zoluntu, iye yangunobangela oyintloko wokubandezeleka kwabantu ukuba yindlalifa kunye neemeko uluntu olukhoyo ngoku. Ukuthandabuza kule mihla kungomnye wemiqobo kwinkqubela phambili nakuphuhliso lomntu.
Amathandabuzo abajamelana nawo umntu ngalo lonke ixesha lobomi bakhe bemihla ngemihla nakwizinto ezibalulekileyo zobomi bakhe bonke bavele ngaphambili, kubomi bangaphambili phantsi kweemeko ezahlukeneyo. Babonakala mihla le njengamathandabuzo kuba khange oyiswe izolo. Basuka mihla le ukuba baphazamise inkqubela yomntu okanye boyiswe ngolwazi ngesenzo. Umjikelo okanye ixesha lamathandabuzo avelayo lixhomekeka kuphuhliso kunye nobudala apho umjikelezo ofana nalowo uthandabuzayo wahlasela khona umntu okuyo.
Kukho iintlobo ezine okanye udidi lokuthandabuza. Zidibene nezinto zehlabathi kunye nezinto ezintathu zangaphakathi nezijikelezileyo: ukuthandabuza ngokwasemzimbeni, ukungaqiniseki ngokwengqondo, ukungaqiniseki ngengqondo kunye nokuthandabuza ngokomoya. Olu luphawu lweentlobo ezahlukeneyo zamadoda esidibana nawo, kwaye nakumadoda amane e-zodiac enza kwaye aqukethe umntu ngamnye. Aba bantu bane kuthethwe ngabo kwaye bafanekiselwa kuMhleli weZodiac "ILizwi," Matshi, 1907 (Umzobo 30).
Amathandabuzo omzimba ahambelana nelizwe lenyama kunye nomzimba wenyama, ummeli walo (libra, ♎︎). Njengoko ingqondo isebenza kumzimba wenyama ihlaselwe yiyo yonke imo yomzimba wenyama ngokubhekiselene nentshukumo yomzimba wenyama kwinyama yenyama. Ukuze ingqondo iqale ukuthandabuza ukusuka kwixesha lokuqala ukwazi ngokusebenza komzimba wenyama, kwaye ngomzimba wayo wenyama iba nolwazi lwehlabathi elibonakalayo. Isilwanyana asithandabuzi njengoko umntu enjalo. Isilwanyana siqala ukuhamba ngokukhawuleza nje ngokuzalwa, kodwa umntu akakwazi ukuma okanye akhwele kwaye ufuna iinyanga ezinde okanye iminyaka engaphambi kokuba azithembele ngeenyawo nangokugcina ukulingana komzimba ngelixa ehamba. Isilwanyana sisilwanyana esivela kubazali baso kanye njengenja okanye ithole kubazali bayo. Ukuba ibangelwa yindlamafa kuphela usana olunyanzelekileyo kufuneka lunyanzelwe ukuba luhambe kunye nemidlalo lujikeleze ngokulula njengethole okanye injana. Kodwa ayikwazi. Oku kungenxa yokuba isilwanyana somntu sixhomekeke kuphela kubunjani besilwanyana kunye notyekelo lookhokho baso, kodwa sikwaphantsi komntu ngamnye, ingqondo; kwaye nengqondo entsha yomzimba, engenakuthembela kumava akhoyo, ayinakukwazi ukuhamba; iyathandabuza kwaye iyoyika ukuba umzimba wayo uza kuwa. Ukuba iphoswe emanzini okokuqala, ihashe, okanye ikati, okanye nasiphi na isilwanyana, iya kuhlasela elunxwemeni, nokuba ayithathi ngokwemvelo emanzini. Ingadada kwilinge lokuqala. Kodwa umntu obekwe okokuqala kwindawo ephakathi, uya kunkcenkceshela, nakubeni enokuba efundile ithiyori yokubhukuda ngaphambi kokwenza ilinge. Into yokuthandabuza iyaphazamisa isilwanyana sendalo somzimba womntu kwaye siyithintele ekusebenziseni amandla ayo endalo, kunye nasekubekeni kwingcamango yokubhukuda ebeyifundile. Isenzo sendalo somzimba sihlala sijongwa ngokuthandabuza okuvela engqondweni. Le ntandabuzo idluliselwa ngengqondo ukusuka kubomi bobunye ukuya kobunye, kweli lizwe lokubonakalayo, de kube ukuthandabuza koyiswa. Umzimba wenyama uhlengahlengiswa ukuze ubonakale kumhlaba wenyama, kodwa ingqondo ayisiwo oweli lizwe; kungowasemzini kulo mhlaba wenyama kunye nomzimba wayo. Ukungaziwa kwengqondo nomzimba wayo kuvumela into eyithandabuzayo engqondweni ukuba ilawule isenzo sayo kwaye iphazamise nolawulo lomzimba. Oku kusebenza kuzo zonke iimeko zobomi nakwiimeko nakwizikhundla ezize emntwini ngelifa.
Ngokuthe ngcembe, ingqondo iyaqheleka kumzimba wayo wenyama kwaye iyakwazi ukulawula ukuhamba kwayo ngokulula nangobabalo. Ukuba, ekukhuleni kwendoda rhoqo, emva kokuba efunde izinto zehlabathi eziyimfuneko kuye ukuba aqhelane nazo-ezinje, umzekelo, njengokuzilolonga kunye nokuziphatha komzimba, ukulondolozwa kwakhe kunye nokuziphilisa ngokushishina okanye ngobungcali. isikhundla, amasiko entlalontle yendawo ahlala kuyo, noncwadi lwelo xesha-kwaye uqhelene nokusebenzisa okuqhelekileyo ukuba woyise ukuthandabuza kwakhe kwangaphambili, kwaye ukuba ufundile ukuzithemba nokuzithemba isikhundla sayo, ke ingqondo idlulile kwinqanaba lokuqala lokuthandabuza kwaye ijongene nokuthandabuza okuvela malunga nezinto zehlabathi ezingaziwayo.
Xa izinto zisuka kubo nabuphi na ubukumkani bezomhlaba buzifezekise okanye zenziwe buthathaka kwiimvakalelo ezibonakalayo, ukuthandabuza kuvela engqondweni yokuba kukho umhlaba ongabonakaliyo, ngaphakathi nangaphandle komzimba, kuba loo ngqondo sele ilungisiwe kwaye yaqhelana nayo umzimba wenyama, kwaye ufundiswe kwaye ubalulelwe kwizinto zomzimba kunye nezinto zehlabathi. Iyathandabuza into yokuba isenzo somzimba sinokuba nemvelaphi yaso kumthombo ongabonakaliyo. Amathandabuzo anjalo anxulumene ne-astral okanye i-psychic yehlabathi engabonakaliyo kunye neminqweno kunye neefom zayo. Ummeli wayo emntwini yi-linga-sharira, okanye umzimba we-virgo-scorpio, ♍︎-♏︎), kunye nemvelo kunye nemikhwa.
La ngamathandabuzo umntu anokujongana nawo kwaye aqubisane nawo kubomi bakhe bemihla ngemihla kunye neemvakalelo. Nantsi imithombo ephuma kwangoko yezenzo zomzimba. Nazi izinto ezinamandla kunye nezinto ezihambelana, okanye zizo, oonobangela bezenzo zomzimba kunye neemvakalelo ezinje ngomsindo, uloyiko, umona, intiyo, kunye nezinye iimvakalelo ezinjengolonwabo kunye nemvakalelo yolonwabo lobudenge. Nanga amandla kunye nemibutho esebenza ngokomzimba oguqulweyo wokomzimba womntu. Ezi mvakalelo kunye neemvakalelo zibonwa ngomzimba wenyama kunye neemvakalelo zaso ngokusebenzisa umzimba wengqondo. Amandla awabonakali emntwini wenyama, kodwa ayabonakala kwindoda yengqondo xa, ngeendlela ezithile, okanye ngokusebenzisa "isidanga," okanye ngesifo, indoda yengqondo iya kukhululwa ngokwaneleyo okanye yahlukane namalahle omzimba ukuze iimvakalelo zayo zibhekiswe kwi-octave apha ngasentla nangaphakathi komhlaba wenyama.
Onke amathandabuzo ahlasele umntu wenyama kufuneka azalisekise kwaye ahlule, njengokuba oyisiwe emzimbeni wenyama. Asoyiswa kwilizwe lemilingo kunye ne-astral form body kuphela ukuya kwinqanaba apho kwahlangatyezwana nawo kwaye koyiswa ngokwasemzimbeni.
Ngaphakathi nangaphezulu kwezinto zehlabathi ngokwasemzimbeni nangokwengqondo kunye namadoda abo lihlabathi lengqondo kunye nengqondo yalo engenakwazi (ingqondo-yobomi, ♌︎-♐︎).
Eli lihlabathi apho umntu ahlala khona kakhulu kwaye, ngenxa yesidingo sokuba ingqondo isebenze ngomzimba wayo wenyama, lihlabathi apho athandabuza kakhulu. Ukusuka ekusetyenzisweni kwesiqhelo okanye ukuphathwa gadalala komzimba wengqondo, ingqondo inxulumene nobomi bayo benyama ukuze ilibale ukuba yeyokwenyani kwaye yona ngokwayo yahlukile emzimbeni wayo wenyama. Ingqondo iyazichaza ekucingeni ngomzimba wayo kunye nobomi bomzimba kuphela, kwaye xa ithiyori icetyiswa ukuba ingqondo kunye nengcinga zahlukile emzimbeni wenyama, nangona zidibene nayo, ingqondo iyathandabuza kwaye ithambekele ekulahleni ingxelo enjalo.
Le ntandabuzo ifumaneka rhoqo phakathi kwabafundileyo kunaphakathi kwabo abangafundanga, kuba umntu wokufunda ufundwa kwizinto ezisebenza ngengqondo kuphela ngokunxulumene nomhlaba wenyama, kunye nalowo uzinzileyo ukucinga ngezinto kunye nezihloko Nxulumana ngokungqongqo kwilizwe elibonakalayo alivumelekanga ukuba lishiye umda wengcinga yakhe kwaye likhulele kwindiza ephezulu. Umntu ofundileyo ufana nomdiliya, onamathela kwinto eboshwe kuwo, waza waziqinisa. Ukuba umdiliya uyala ukunamathela, unokwazi ukushiya iingcambu zawo, ungene kuwo kwaye ukhule kumhlaba onzulu wabazali, uya kuyeka ukuba ngumdiliya. Ukuba umntu ofundileyo unokukhululwa ekuhlaselweni kwezinye iingqondo, kwaye neengcinga zakhe zifikelele kuye kwaye akhule kwizinto zomzali apho ezinye iingqondo zikhule khona, ke, njengesityalo, akuyi kufuneka akhule kolunye uhlumo kwaye unyanzelwe ukuba alandele ukujija kwabo njengokwakhe, kodwa uya kuba lukhula lomntu ngamnye kwaye abe nelungelo lokufikelela phezulu kumoya okhululekileyo kwaye afumane ukukhanya okuvela macala onke.
Umdiliya unamathela kwinto yawo; ayinakwenza ngenye into kuba sisityalo somdiliya kuphela, ukukhula kwemifuno. Kodwa umntu uyakwazi ukuyicima ingcinga yakhe kwaye akhulele ekukhuleni kokufunda kuba sisityalo esingumntu sendalo yokomoya enoxanduva nesiphelo sayo kukukhula ngaphandle kobukumkani obunomdla bendalo kwaye nakwindawo ekhanyayo yolwazi lokomoya. . Indoda yokufunda nokuhamba ngeenyawo nje ayikhuli ngaphaya kokufunda kwayo ngenxa yamathandabuzo. Amathandabuzo, kunye noloyiko lokuba ngumntwana ongenguye owokuthandabuza, umnika ngakumbi ukuba axhomekeke ekufundeni. Ukuthandabuza kumenza athandabuze. Uthandabuza ixesha elide; woyika ukumbamba aze amphose kwihlathi lokufunda alithandayo ukuba libe sisiphelo sayo yonke inzame yengqondo, kungenjalo uyaqhubeka nokuthandabuza ade athandabuze yonke into, kubandakanya ukufunda kunye nokuthandabuza kwakhe.
Ingqondo ecamngca ngokwayo njengengqondo esebenza kwilizwe leengqondo, elahlukileyo kwihlabathi elibonakalayo, ihlala ihlaselwa ngokuthandabuza. Iingxaki aqubisana nazo ingqondo-ezinje ngala: umahluko phakathi kobudlelwane kunye nobuntu kunye nemvelo, imvelaphi yomntu, umsebenzi ebomini, ikamva eliqinisekileyo, zezi abo bajamelane nazo zonke iingqondo ukuzama ukwenza ngokukhululekileyo kwilizwe lezengqondo.
Ukuthandabuza ngokubhekisele kuyo nayiphi na imibuzo, okanye yenkululeko yengqondo evela kwiimvakalelo, kunotyekelo lokuwenza mnyama umbono. Ukuba umbono wengqondo umnyama, ingqondo iyalahlekelwa kukuzithemba. Ngaphandle kokukhanya akunakubona okanye kucombulule iingxaki, okanye kuyibone indlela yayo, kwaye ke ibuyela kwimihlaba enomdla yokucinga eyayiqhelileyo.
Kodwa ingqondo enokuqiniseka kwinto yayo yasimahla igxotha ubumnyama bokuthandabuza. Ibona ikhondo layo lisebenza kwilizwe leengcinga elizenzileyo. Ukufumana ukuzithemba kunye nokuqonda kwengqondo yayo kunye neengcinga zelizwe, ibona ukuba iifom zehlabathi lemilingo zimiselwe ziingcamango zehlabathi lengqondo, ukuba ukudideka kweminqweno kunye nokuphazamiseka kweemvakalelo kubangelwa kukudideka iingcinga kunye nemijikelezo enqamlezayo yeengcinga, zokuba unobangela wamandla kunye nezinto ezinamaqobelo njengeefomu kwilizwe lezengqondo zigqalwa ziingcinga eziveliswa yingqondo. Xa oku kufezekisiwe, onke amathandabuzo ngokunxulumene nonobangela kwiimvakalelo kunye neemvakalelo zisusiwe, izenzo zomntu zibonakala ngokucacileyo kwaye izizathu zazo ziyaziwa.
Ukuthandabuza malunga nehlabathi lokomoya kunye nomntu wokomoya kunento yokwenza nokungafi komzimba ophuma ngaphezulu kwaye unxibelelane nomntu ongokwenyama ngengqondo yomzimba. Njengommeli wehlabathi lokomoya, kaThixo, woMqondo oManyanisiweyo, umntu wokomoya uyingqondo ephezulu yomntu, ubuntu bakhe kwihlabathi lokomoya (umhlaza-capricorn, ♋︎-♑︎). Amathandabuzo anje ngokubetha ngengqondo engafakwanga le yile: yokuba ayizukuqhubeka emva kokufa; ukuze kuthi njengoko zonke izinto ziphuma kumzimba wenyama ngokuzalwa kwaye kudlule okwenyama ngokwenyama ngokufa, ngokunjalo kuyakuphuma emhlabeni wenyama kwaye ziya kuyeka ukubakho; ukuba iingcinga zisenokuba yimveliso okanye zisabele kubomi bomzimba, endaweni yokuba zibangelwe bubomi bomzimba. Uthandabuzo olukhulu ngakumbi kukuba, nokuba ingqondo iyaqhubeka emva kokuba ifile, iya kudlulela kwimeko ehambelana nobomi basemhlabeni, ukuba ubomi emhlabeni ngemizimba yenyama buzakuba buphelile ngonaphakade kwaye abuyi kubuyela emhlabeni ubomi.
Ingqondo iyabuthandabuza ubukho okanye ubukho obunokubakho bukho kwilizwe lokomoya lolwazi apho izimvo zazo zonke izigaba zobukho, apho ingcinga ithatha imvelaphi yayo; ukuba eli lizwe liqhubekeka lolwazi, kunye neendlela zalo ezingafiyo, kungenxa yokutsala kwengqondo yomntu kunokuba ithi ingxelo yenyani yokomoya. Okokugqibela, ingqondo engafakwanga iyathandabuza ukuba ikwayiyo le nto ngengqondo engafiyo kunye nangengqondo iphela. Le ntandabuzo yeyona ntandabuzo inzulu, iyonakalisayo kwaye imnyama kubo bonke, kuba ithanda ukwahlula ingqondo engengowasemzimbeni kwaye iphantsi kolawulo lwezinto ezidlulayo, ukusuka kumzali ongonaphakade nokungafi.
Ukuthandabuza sisono. Esi sono sobugqi sokuthandabuza kukuthandabuza kubomi bokomoya. Isohlwayo sokungathandabuzeki ubumfama bokomoya kunye nokungakwazi ukubona iinyaniso zokomoya kuyo nantoni na nokuba zichongiwe.
Unobangela wokuthandabuza kwamadoda ohlukeneyo bubumnyama obungafundiswanga bengqondo. Kude kube ubumnyama bugqityiwe okanye buguqulwa ngumbane wangaphakathi, umntu uya kuqhubeka nokuthandabuza kwaye uya kuhlala ekwimeko athi azifumane kuyo. Ukuthandabuza kokungafi ngokwanda kukhula engqondweni yomntu ngabo baya kulawula kwaye balawule ubomi bakhe ngokulawulwa kwengqondo. Uloyiko lubanjwa phambi kwengqondo kwaye lwenze amawele phantom amathandabuzo. Amadoda azivumela ukuba babe ngababingeleli-babanjwe, ukuze bagcinwe ebumnyameni bengqondo kwaye batyakatyelwe ekuzithobeni ngamawele okuthandabuza kunye nokoyika. Oku akusebenzi kuphela kubuninzi bokungazi, kodwa nakumadoda okufunda anengqondo eziqhutywa ngoqeqesho lwakwangoko kwi-grooo ethile, kwaye abathi ngenxa yoko boyike ukuqhuba ngaphaya kwee-grooo zabo kunye nokuthandabuza amandla abo okukhula kubo.
Ukuthandabuza kuzisa ukuthandabuza. Indoda ehlala ithandabuza iyingxaki kuye kwaye iyinkathazo kuye konke okujikelezileyo. Ukuthandabuza okuqhubekayo kwenza ukuba umntu abe ngumbethe, etyhola umntu ongenamandla okwenza into, esoyika iziphumo zesenzo sakhe. Amathandabuzo anokuguqula ukucinga nokubuza kube sisibetho, uyolo lwabo kukuphikisana kunye nokukhahlela, ukulahla ubumdaka okanye ukuxhokonxa iinkolelo zabo badibana nabo, ngokubhekisele kwithemba okanye ukuzithemba kubomi bexesha elizayo, kwaye, endaweni yokholo nethemba, ukushiya ukungoneliseki, ukungoneliseki kunye nokuphelelwa lithemba. Ukuthandabuza kuzisa uthandabuzo engqondweni yomntu onganyanisekanga nonganyanisekanga kwaye otyhola iinjongo zabanye, ofumana isiphoso sayo yonke into, ohlebayo nocekisayo kwaye ozama ukosulela bonke abantu ngokungathandabuzekiyo obenzile engqondweni yakhe.
Umathandabuzo yinto engapheliyo ebangela ingqondo ukuba ihambe phakathi, kwaye ungaze uthathe isigqibo ngento, enye okanye enye. Iglobhu iphoswa phezu kwengqondo njengesiphumo sokungafani phakathi kwamazwe amabini okanye nangaphezulu kwaye ingahlali okanye ithathe isigqibo nakweyiphi na. Ke sifumana amadoda alusizi awakhe athathe isigqibo nakwintoni na, okanye, ukubona, ukuba anokuthatha isigqibo, ayasilela ukwenza okuthile ngenxa yokuthandabuza okanye uloyiko olubangelwa sisigqibo. Le yokungaqiniseki kwengqondo kunye nokwala ukwenza kwenza ukuba ingqondo ingakwazi ukwenza isigqibo kunye nokwenza, kodwa kunokuba ikhuthaze ukulala kunye nokungazi kunye nokuzala ukudideka.
Nangona kunjalo, kukho injongo yokuthandabuza, inxenye ekufuneka iyidlalile kuphuhliso lomntu. Ukuthandabuza yenye yezokuqalisa kwengqondo kukukhanya. Amathandabuzo agada zonke iindlela eziya kulwazi. Kodwa ukuthandabuza kufuneka koyiswe yengqondo ukuba loo ngqondo iya kuthanda ukulandela izazela zangaphakathi. Ukuthandabuza ungumgcini wolwazi othintela owoyikayo kunye nengqondo engenamandla ukuba idlule ngaphaya kwendawo yayo. Ukuthandabuza kunyanzela iintsana zengqondo ezingathanda ukukhula ngaphandle komzamo, kwaye ube nobulumko ngaphandle kolwazi. Njengobumnyama obuyimfuneko ekukhuleni kwezilwanyana nezityalo, ngokunjalo nobumnyama bokuthandabuza buyimfuneko.
Ingqondo ethandabuzekayo engafundanga tyala elilungileyo okanye isenzo esifanelekileyo ibonakalisiwe ngamaxesha anzima ebomini. Oko, umzekelo, njengaxa umntu emi edidekile njengezithuthi ezimbini ezisondela kwicala elahlukileyo. Ijonga kuqala enye, ize enye, ingakhethi buso, ngendlela eyahlukileyo yokuphepha ingozi. Oku kuthandabuza okukho ngokungathandabuzekiyo, kubonakala ngathi kunyanzelisa ukubhubha okungaqhelekanga kwesenzo esingalunganga, njengoko umntu ongaqhubeki ngokungafanelekanga phantsi kweenyawo zamahashe.
Lowo uyeka ukuthatha isigqibo phakathi kwezi zikhundla azinikezeleyo, ngenxa yokuthandabuza ukhetho oluchanekileyo, uhlala ebonwa ukuba uyekele elona thuba lihle. Ithuba alize. Amathuba ahlala ekhona nangona edlula rhoqo. Amathuba yinkqubo yokuhamba kwamathuba. Indoda ethandabuzekayo iyakhalaza ithuba sele ihambile, kwaye ilahlekile, kodwa ixesha elichithelwe ekukhaleni ilahleko kunye nokugxeka umntu, iyamthintela ukuba angalibona ithuba elikhoyo, kodwa iphinde ingabonwa de ibe ibuye nje. Ukungaqiniseki okuqhubekayo kunye nokusilela ukubona amathuba kubangela ukuba umntu athandabuze ukukwazi kwakhe ukukhetha okanye ukwenza into. Umntu uhlala ethandabuza iingcinga zakhe kunye nezenzo zakhe zibangela ubumnyama obukhoyo, ukungathandeki kunye nokudangala, zonke ezo zinto zichasene nokuzithemba esenzweni. Isenzo sokuqiniseka sikhokelela kwisandla esiphosa ibhola ngqo kwiphawu. Ngesandla esenzweni salo, ngokuhamba, ngokuhamba komzimba, ngokugcwala kwentloko, ngokujonga ngamehlo, ngesandi selizwi, imeko yengqondo yalowo uthandabuzayo okanye lowo wenza isenzo ngokuzithemba kunokubonwa.
Ukuthandabuza yinto emnyama nengapheliyo apho ingqondo izabalaza kwaye yomelele njengoko iyoyisa. Ulwazi luyeza okanye lukhule lube njengokuthandabuza kohlulwa, kodwa uthandabuzo loyiswa kuphela lulwazi. Singathini na ukumoyisa amathandabuzo?
Umathandabuzo woyiswa sisigqibo sokuzithemba esilandelwa sisenzo esibonisa isigqibo. Uviwo lokuba yeyiphi eyona nto ibaluleke kakhulu kwezi zifundo zibini okanye izinto ayisiyiyo intembelo yokungaboni, nokuba ayithandabuzi, nangona uthandabuzayo uyangena kwaye uyakuba namandla xa ingqondo iyala ukuthatha isigqibo ngokuthanda kwayo. Ukuthandabuza soze kuthathe isigqibo; ihlala iphazamisa kwaye ithintela isigqibo. Ukuba umntu unokoyisa ukuthandabuza, malunga nokukhetha phakathi kwezinto ezimbini, okanye isigqibo kumbuzo, uya kuthi emva kokuqwalaselwa ngononophelo lombuzo, athathe isigqibo aze enze ngokufanelekileyo, ngaphandle kwamathandabuzo okanye uloyiko malunga nesiphumo. Ukuba umntu uthatha isigqibo esenza isenzo wenze into engenamava isigqibo sakhe kunye nesenzo sakhe sinokungangqinelani kwaye, eneneni, kwimeko enjalo, ihlala iphosakele. Nangona kunjalo, kuya kufuneka aqhubeke ahlolisise kwinqaku elilandelayo okanye umbuzo aze enze isigqibo kwaye enze ngokwesigqibo sakhe, ngaphandle koloyiko. Esi sigqibo kunye namanyathelo kufuneka athatyathwe emva kovavanyo ngononophelo lwempazamo eyenziweyo kwisigqibo kunye nesenzo esedlule. Ukuhlehlela kwakhona ukuthandabuza okuqinisekileyo emva kokuba isenzo esithile siqondakalise ukuba siyinto engeyiyo, nangona bekukholelwa ukuba kulungile ngelo xesha, kukubuyela ezingqondweni kwaye kuthintele ukukhula. Umntu kufuneka ayazi impazamo yakhe, ayivume kwaye ayilungise ngokuqhubeka nokwenza. Impazamo yakhe ifanele imzuzise ngokumenza akwazi ukuyibona loo nto.
Ngokuthatha isigqibo kunye nokuthatha isenzo, ukuqaphela iimpazamo zomntu kunye nokuzabalaza ngokunyaniseka kokuzazi nokuzilungisa, umntu uya kusombulula imfihlakalo yesenzo esifanelekileyo. Umntu uya kufunda ukwenza isigqibo kwaye enze kwaye uya kusombulula imfihlakalo yesenzo esifanelekileyo ngokholo olomeleleyo kunye nenkolelo yokuba yena ungomnye ngengqondo ye-Universal Mind okanye kaThixo, ngobuntu bakhe, umntu ophakamileyo okanye ingqondo yaphezulu, nokuba nengqondo yakhe yokwenyani ukuba uvela kulo mthombo kwaye kuya kukhanyisa ingcinga yakhe. Ukuba umntu ucamngca ngale ngcinga, ayibambe rhoqo engqondweni, enze isigqibo ngayo kwaye enze ngokwesigqibo, ngekhe alifunde ixesha elininzi enze isigqibo ngobulumko, enze isigqibo esifanelekileyo, kwilifa lolwazi olutyunjelwe nguyise ongumzali, nje ukuba nje efumene.